musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » African Tourism Board yakaudza Air France, tinokuda!
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Cote d'Ivoire Kupwanya Nhau • France Kuputsa Nhau • Gambia Kupwanya Nhau • Kenya Kupwanya Nhau • Mozambique Breaking News • Seychelles Kuputsa Nhau • Tanzania Breaking News
Air France yakangopa zvinopfuura chiratidzo chetariro kuAfrican Travel and Tourism Indasitiri.
African Tourism Board inofara kudzidza nezvekuwedzera kwakarongwa nendege yenyika yeFrance yemwaka uno wechando.
Air France iri kutarisa netarisiro mukuwedzera kusvika kwayo kuAfrica apo mutakuri wenyika yeFrance akaunza yavo yechando 2021/2022
AIr France ichave ichiwedzera network yayo yepasi rose kuenda kuZanzibar, Seychelles Maputo neBanjul
Sachigaro weAfrican Tourism Board anoombera danho iri
Air France, yakanyorwa seAIRFRANCE, ndiyo inotakura mureza weFrance inotungamirwa muTrmblay-en-France. Icho chikamu cheAir France-KLM Group uye inhengo yekutanga yeSkyTeam yepasi rose mubatanidzwa wenhandare.
Neye COVID-19 kufamba uye kushanya ku Africa kunoramba kuri dambudziko. Kuratidza chivimbo icho Air France chiri kuratidza kuti Africa ichaumba kuvimba muindasitiri uye netariro pakati pevangangodaro vashanyi.
Paris-Banjul paAir France
Air France ichatanga kushandira Banjul, Guta Guru reGambia kuWest Africa.
Paris- Banjul ichavhiyiwa paAirbus A330 ine zvigaro makumi maviri nezviviri. Inosanganisira 224 nzvimbo munzvimbo yebhizinesi kirasi, 36 premium Economy uye 21 zvigaro zveEconomy.
Gambia inyika diki yekuWest Africa, yakasungwa neSenegal, ine gungwa rakamanikana reAtlantic. Inozivikanwa neayo akasiyana siyana ecosystem akapoterera pakati peGambia Rwizi. Mhuka zhinji dzesango muKiang West National Park uye Bao Bolong Wetland Reserve inosanganisira tsoko, ingwe, mvuu, mafisi, uye shiri dzisingawanzo. Guta guru, Banjul, uye Serrekunda iri padhuze inopa mahombekombe. Sevhisi inofanirwa kutanga muna Gumiguru 31.
Paris- Maputo paMhepo France
Zvakare kutanga musi waGumiguru 31 ishandiro nyowani yeAir France kuMaputo, Mozambique.
Iyi nzira nyowani yekuMaputo ichaitwa pane yakakura Boeing 777-300ER inopa Yekutanga Kirasi, Bhizinesi, Premium Economy, uye Economy.
Mozambique inyika yekumaodzanyemba kweAfrica ine mahombekombe egungwa marefu eIndia ane mahombekombe akakurumbira seTofo, pamwe nemapaki emahombekombe egungwa. MuQuirimbas Archipelago, makiromita mazana maviri nemazana mashanu emakorari zvitsuwa, mangrove-akafukidzwa Ibo Island ane matunhu enguva dzekoloni anopona kubva panguva yekutonga kwePutukezi. Iyo Bazaruto Archipelago iri kumaodzanyemba ine ma reef ayo anochengetedza husingawanzo hupenyu hwegungwa kusanganisira dugongs.
Paris- Abidjan paMhepo France
AF704 ichange ichishanda pakati peParis Charles de Gaulle kuburikidza neBanjul kuenda kuAbidjan kuIvory Coast.
Ivory Coast nguva pfupi yadarika yakagamuchira Sachigaro weAfrican Tourism Board Cuthbert Ncube uye iri munzira yekuwedzera kusimudzira kushanya munyika ino yeWest Africa.
Côte d'Ivoire inyika yeWest Africa ine mahotera emahombekombe, masango anonaya, uye nhaka yeFrance-yekoloni. Abidjan, pamhenderekedzo yeAtlantic, ndiyo nzvimbo huru yemadhorobha. Zviratidzo zvaro zvemazuva ano zvinosanganisira ziggurat senge, kongiri La Pyramide uye St. Kuchamhembe kwenzvimbo yepakati yebhizinesi, Banco National Park inonaya mvura inonaya ine nzira yekufamba musango.
Paris- Zanzibar paMhepo France
Nechekare Gumiguru 18, Air France ichabatana Paris nechitsuwa chezororo muTanzania, Zanzibar.
Iyi sevhisi ichaitwa nekumira muNairobi, Kenya pane Boeing 787-9
Tourism muZanzibar inosanganisira indasitiri yekushanya nemhedzisiro yayo kuzvitsuwa zveUnguja nePemba muZanzibar dunhu rakazvimiririra muUnited Republic yeTanzania.
Paris - Seychelles paAir France
Seychelles Tourism zvaziviswa kare uye ndinofara kugamuchira A330-2200 sevhisi kubva kuParis kuenda kune ino French neChirungu inotaura Indian Ocean yekushanya paradhiso. Sevhisi pakutanga yakatanga muna 2019 uye yakavhiringidzwa nekuda kwe COVID-19.
Iyi sevhisi ichatanga muna Gumiguru 23.
African Tourism Bhodhi Sachigaro Cuthbert Ncube vakaudza eTurboNews, aifara nezvekuwedzera kweiyi netiweki yeAir France kuAfrica. Ncube anonzwa ichi chiitiko chakanakisa kusimudzira kweAfrican Tourism.